Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyey heshiiska isu celinta Maxaabiista ee Soomaaliya iyo Hindiya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyey heshiiska isu celinta Maxaabiista ee Soomaaliya iyo...
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyey heshiiska isu celinta Maxaabiista ee Soomaaliya iyo Hindiya
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulanka shir Guddoominayay ayaa ugu horeyn tacsi u diray Xildhibaan Maryan Macalin oo Hooyadeed ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Guddiga Garsoorka ee Golaha Shacabka Xildhibaan Shariif Sheekhuna Maye ayaa mudanayaasha Golaha ka codsaday in ay ansixiyaan heshiiska isu celinta maxaabiista ee Soomaaliya iyo India.
Ansixinta heshiiskan oo cod la geliyay ayaa waxaa u codeeyay 161 mudane sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo sheegay in sharcigan uu yahay mid ansax ah.
Intaasi ka dib Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha ka hor akhriyay qaraarka heshiiskan lagu ogolanaayo.
waxaa la guda galay warbixinta kooban ee Xildhibaanadii soo kormeeray maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalka Uganda, waxaana golaha ka hor akhrisay Xildhibaan Raabaca Sheekh Nuur oo ka mid ah guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Shacabka tilmaamtay in maxaabiista ay dhibatooyin ku heysato xabsiyada dalka Uganda.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in Guddiga Arrimaha dibadda ee Golaha Shacabka in iyagoo kaashanaya Wasaaradda Arimaha dibadda ay dib warbixin ugu soo celiyaan Golaha oo faah faahsan.
Intaasi kadib Guddiga Madax banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka oo afartii bilba mar hor yimaada Golaha Shacabka ayaa golaha ka hor jeediyay warbixin ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha hadda u qorsheysan.
Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in kulanka kan xiga ee dhici doona maalinta Isniinta ah laga sii amba qaadi doono ajendayaasha kale ee Golaha horyaalla.
Previous articleWasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo heshiis iskaashi la saxiixatay ITU
Next articleWasiirka howlaha guud” Guul ayuu ku soo dhamaaday safarkeyga shaqo ee Turkiga”+sawirro